XASAASI: Jose Mourinho oo weerar ku qaaday Xiriirka FA-ga Kadib markii ay ciqaabi waayeen macalinka Liverpool Jurgen Klopp( Kaligay ayaad Iga adagtihiin) | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » Premier League » XASAASI: Jose Mourinho oo weerar ku qaaday Xiriirka FA-ga Kadib markii ay ciqaabi waayeen macalinka Liverpool Jurgen Klopp( Kaligay ayaad Iga adagtihiin)
XASAASI: Jose Mourinho oo weerar ku qaaday Xiriirka FA-ga Kadib markii ay ciqaabi waayeen macalinka Liverpool Jurgen Klopp( Kaligay ayaad Iga adagtihiin)	Jose Mourinho ayaa xalay sheegay in uu la dhibaateynayo dhaqamada xiriirka kubadda cagta FA-ga.
Tababaraha Manchester United ayaa bilaabay inuu dib uqado dhacdooyinkii foosha xumaa ee Jurgen Klopp iyo Arsene Wenger ay sameeyeen.
Ka dib markii kooxdiisa fursado lumiyeen islamarkaana afarta sare wali aysan usoo bixin , ayuu si carro leh u hadlay Mourinho.
Jose Mourinho ayaa aaminsan in sharciyada FA-ga kaliya uu u yahay kaligiis dhibane kadib markii uu hoosta ka xaqriiqay caqabadaha sharcidarada ah ee uu wajahayo.
kaaliyahayga ayaa la ganaaxay lix kulan isagoo taaban cidna, laakiin waxaa jira macalimiin ku qeyliyay ama kala tuuray garsoorayaasha kuwaasoo aan wajihi ganaaxii ay mudnaayeen.
Arsene Wenger ayaa riixay garsooraha afaraad ee Anthony Taylor ka dib markii uu taribuunka saaray garsoore Jon Moss intii lagu jiray kulankii Burnley iyo Arsenal ee ka dhacay Emirates.
Sidookale Jurgen Klopp ayaa ku qeyliyay garsooraha afaraad ka dib markii Simon Mignolet ka badbaadiyey rigoore habeen ka hor weeraryahanka Chelsea Diego Costa.
Macalinka Manchester United Jose Mourinho ayaa dareensan in dhacdooyinkaan oo dhan ay yihiin kuwo aan sidii loo baahnaa aan loogu ciqaabin tababarayaashii ka dambeeyay.
Mourinho ayaa yiri: “qof ayaa ju qeyliyay garsooraha afaraad kadibna garsooraha ayaa ku jawaabay ‘waxaan ku raaxaystaa xamaasadaada marka aad garoonka joogto , taas ma ahan wax cadaalad ah ayuu yiri Mourinho oo ual jeeday sheekadaan tii dhaxmartay Klopp iyo garsoorkii afarad ee kulankii Chelsea iyo Liverpool.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/xasaasi-jose-mourinho-oo-weerar-ku-qaaday-xiriirka-fa-ga-kadib-markii-ay-ciqaabi-waayeen-macalinka-liverpool-jurgen-klopp-kaligay-ayaad-iga-adagtihiin/">XASAASI: Jose Mourinho oo weerar ku qaaday Xiriirka FA-ga Kadib markii ay ciqaabi waayeen macalinka Liverpool Jurgen Klopp( Kaligay ayaad Iga adagtihiin)</a>